हिजो बढेको सुनको मूल्य आज घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
हिजो बढेको सुनको मूल्य आज घट्यो, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । हिजो बढेको सुनको मूल्य आज घटेको छ । सुनको मूल्य आज सात सय रुपैयाँ सस्तो भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन उक्त रुपैयाँ सस्तो भएसँगै आज प्रतितोला ९३ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन ९४ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै तेजाबी सुन पनि सोही अन्तरमा घटेर आज प्रतितोला ९२ हजार ९ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो सुन अघिल्लो दिन ९३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
चाँदीको भने आज स्थिर भाउमा कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन १२ सय १५ रुपैयाँ प्रतितोला कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज घटबढ नभएको महासंघले जनाएको छ।
यसैबीच फेसबुक, युट्युबलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापतको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट अमेरिकी डलरमै गर्न पाइने भएको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं विप्रेषण सेवा प्रदायक कम्पनीले विद्युतीय माध्यमबाट नेपालमा विप्रेषण भित्र्याउन सक्ने र नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट विद्युतीय भुक्तानी उपकरण (मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक कार्ड, वालेट आदि) मार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतको समीक्षामा भनिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले झन्डै एक वर्ष (गत माघ १७) देखि सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको अनौपचारिक भुक्तानी रोकेको थियो । तर त्यसका लागि कार्यविधि बनाइएको थिएन । कार्यविधि नहुँदा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलगायत सबै प्रकारका भुक्तानी प्रभावित भएका थिए । अनौपचारिक रूपमा हुने भुक्तानी पनि रोकिएको थिएन । चोरी बाटोबाटै पैसा बाहिरिरहेको थियो । अब ती कारोबार पनि बैंकिङ प्रणालीमा समेटिने जानकारहरूको भनाइ छ ।
नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि डलरमा हुने ससाना भुक्तानीमा सजिलो हुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान महासंघ) का पूर्वअध्यक्ष विनोद ढकालले बताए । ‘यो साह्रै राम्रो काम हो । तर छिटो कार्यान्वयनमा आउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्थाले ससाना कारोबार पनि औपचारिक प्रणालीमा समावेश हुनेछन् ।’ भुक्तानी औपचारिक प्रणालीमार्फत गर्न तयार भए पनि विधि र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अन्योल थियो ।
अब उक्त समस्या समाधान हुने उनले बताए । सामाजिक सञ्जालमा हुने भुक्तानी मात्र नभई कानुनले वञ्चित नगरेका सबै प्रकारका भुक्तानी डलरमा गर्न पाउने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गर्न लागेको छ । यसअनुसार नेपालमा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाबाट विद्युतीय भुक्तानी उपकरण (मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, इलेक्ट्रोनिक कार्ड, वालेट आदि) मार्फत स्वदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्रदान गर्न सकिनेछ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वसाधारणले वाणिज्य बैंकमा गएर डलरको प्रिपेड कार्ड लिन सक्नेछन् । सोही कार्डमार्फत राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमासम्म विदेशमा डलरमा भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । प्रिपेड कार्डका लागि बैंकमा डलर खाता हुनुपर्ने छैन । हाल नियमित रूपमा डलरको स्रोत भएकाले मात्र बैंकमा अमेरिकी डलर (विदेशी मुद्रामा) को खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ ।
सामाजिक सञ्जालमा रकम भुक्तानी गर्न व्यवस्थित ‘पेमेन्ट गेटवे’ नभएकाले प्रायः विज्ञापनदाताले अनौपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले विदेशमा बस्ने आफन्त वा विदेशी कम्पनीका तर्फबाट भुक्तानी गर्न लगाई पैसा पठाउने गरेका छन् ।